Ndakajuma zvimaBen Ten zvangu two, zvakandipedzera that day – Vanoda Zvinhu
Eish, mara wena, ndanzwa nenyere. Ndainge ndakagara hangu pacouch ndichizvibatabata and ndainge ndabvisa hembe dzese ndiri musvo.
Ndainge ndabvisa everything kusara nebutsu chete, apa two zim guys vainditambira kuita my own private show vakapfeka ma boxers chete, they were powerfully built kuratidza kuti vaienda kuGym. I couldn’t stop looking at the bulging and chocolate muscles, ndaibva ndanzwa kuda kusvirwa more and was going to be my first time kusvirwa nevakomana two at the same time. Gosh, I don’t know how long I’ve had this fantasy apa murume wangu was away. Murume wangu didn’t care kuti ndinonzwa sei you know vanhu vePolitics and yes ndainge ndakaroorwa ne politician yeANC, ainge asingagone kundisvitsa pakutundawo so ndakatsvaga vakomana vekuZim chaivo since inini I was also from there.
I had met the two Zimbabweans at Newscafe in Woodmead Joburg, we chatted and I told them kuti ndaida kusvirwa and I would pay them. Vakomana vakaramba vachinditambira apa juice yebeche yainge yakutoyerera pa couch, one of them akabva awuya pa couch and started kundikisa. Ndainge ndisati ndamboitwa kiss like that, muromo wake covered maLips angu apa maoko ake was everywhere pamazamu, padumbu kusvikira asvika pabeche and he wasn’t wasting time akatanga kutambisa matinji angu, eish the young man aiziva zvaaiita. Akatanga kunanzwa minyatso yangu and I could see in his boxer kuti mboro yake yainge yakumira, ndakaibata ndikaibutsa ndikanza kuti yainge yamira sesimbi.
The second guy akamira kutamba and he came to us achiratidza kuti ane confidence, zvatooneka kuti ainge atomisa mboro kare, haina kuita waist time akananga straight kubeche rangu akatanga kutamba nematinji ndikabva ndatanga kuchemerera nekunakirwa. Akasekerera ndokuti beche rakatota kare ndiro randinoda, akabvisa boxer ndokuburitsa zimboro rake rainge rakafuta apa tsinga dzakati tarara kuzvimba and inini ndinoda mboro hombe. Shamwari yake yakadza yamira kudya minyatso ndokuburitsawo mboro yake ndokuiyisa mumuromo mangu apa yainge yakamira kunge simbi. Ndakabva ndatanga kuidya apa rimwe ruoko rwangu was busy kubonyora mboro yefrienda zvekuti at one point ndakanzwa kunge achatundira face yangu.Shamwari yake yakavisa mboro mumuromo and stepped back zvikanzi nhasi ndinoda kukusvira, ndakaita position yekusvirwa nekumashure apa mumwe wake akabva aiisa mboro yake mukanwa mangu apa kumashure ndaivhurwa makumbo akava atanga kutambisa matinji nezvigunwe zvake.
Akaipfekedzera slowly mubeche rangu ndikanzwa kakurwadza ichipinda ndokubva atanga kukoirira slow slow pasina chinguva mboro yake yese yainge yanyura mubeche rangu, akandibata muchiuno ndokuwedzera speed, ndakatanga kusheedzera all sorts of zulu insults and I even shouted, ” NGITHANDA IPIPI!!!” akabva aita manyemwe ndokutanga kuita beche rekupomba chaiko zvine simba. I was drooling all over mboro yeshamwari yake ainge ayita kubata musoro achisvira mukanwa mangu, muviri wangu wese was just shaking mazamu achiita kunge achadonha, machende ake airova rova matinji angu zvakandipa kuti ndinzwe kuda kutunda zvekuti ndakanzwa muviri wangu wese uchiita kunge murikufamba magetsi and this was the first time since ndaroorwa.TJO!
Akaburitsa mboro yake and signalled to his friend to take over whilst he rested, ndakatarisa the other side ndokubva aipfekedzera apa mboro yake yainge yakafuta yakamboita kunge isingakwane mubeche rangu asi payakapinda yaiguma guma makona ese mukati mebeche zvekuti ndakashaya kuti ndobata papi. Akaipushira mukati kati pasina nguva ndainge ndakutunda again, ndakanakirwa asi ndainge ndaneta nekukoirira akabva andirarisa nemusana. Akavhura makumbo angu aripamusoro ndokutanga kundisvira hard zvekuti ndakabva ndatunda futi apa shamwari yake ainge aiisa mboro yake mukanwa mangu.Akaiburitsa ndokuyisa pakati pemazamu angu apa machende ake aivhara mhuno dzangu, ndakabata mazamu angu and squeezed mboro yake pakati akatanga kukoira apa shamwari yake anga akusvira zvine speed zvekuti tese takabva tatunda ka one and the one aisvira pamazamu akazadza huronyo hwake padumbu pangu… Imi kaimi ndakasvirwa zvainaka. These days handitombonetse murume wangu nekuti ndakuziva vanhu vekudeedza kana ndakuda kusvirwa….
Next story Kusvirwa naBill Window Cleaner weKubasa!
Previous story Madyirwo Andaiitwa Beche naDani – Aindidiridza Huronyo padumbu pangu!